OS ကို-STORE | OS ကို-STORE ဘလော့ခ် - အပိုင်း 34
ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များ、ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး、multi-ဘာသာစကား switch ကို、multi-ငွေကြေးပေးချေမှု，multi-function ကိုပလက်ဖောင်းရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးစီးပွားကူးသန်းက်ဘ်ဆိုက်
ဧပြီလ 19, 2013 admin ရဲ့ 1
OS-STore 的创建是在我们2007年生意失败后重新规划白手创业的，သာ 20,000 ယွမ်(အဲဒီအချိန်တုန်းကအကြောင်းကို 2500 အမေရိကန်ဒေါ်လာ)e-commerce operating စတင်ခဲ့သည်；မည်သည့်ပြင်ပအင်အားစုတွေ၏အကူအညီမပါဘဲ，ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်တိုးတက်မှု၏နှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာ，အဆိုပါ site ကိုကမ္ဘာတွင်အဆင့်အတွက်ယခု，20000 ၏မှတ်တမ်း，အထိသုံးဆယ်သန်း၏နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်(အကြောင်းငါးသန်းဒေါ်လာ)。 တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဒီဂျစ်တယ်မဟုတ်ပေမယ့်，ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အများအပြားအတိတ်၏အတွေ့အကြုံပေါင်းစပ်，မျိုးစုံအောင်မြင်မှုများနှင့်ရလဒ်များကိုကိုဖန်တီးရန်အနည်းငယ်သာပိုက်ဆံနှင့်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်，တစ်ဦးလျှင်မြန်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုနှုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်လုပ်နည်း，အားလုံးအရောင်းနှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ယင်းလုပ်ငန်း၌ရှိသမျှသောအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်အမြတ်သို့မဟုတ်ပေးသွင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်。 發展電子商務... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇန္နဝါရီလ 29, 2013 admin ရဲ့ 52
Original Source Trade isachannel of international trading company and base in Austria (ဥရောပ). The cooperation of E-Commerce and office for customer is around the world to achieve the purpose. Os-store has seen... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဥပဒေရေးရာအနက် Nokia က processor ​​ကို Software များ HTC က OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows Intel က စီပီယူ HD Graphics နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Technology_Internet Samsung က ပရိုဆက်ဆာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows Intel က Server ကို OS ကို-STORE HTC က Sony Ericsson က Samsung က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Software များ device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet Intel က HD Graphics ဥပဒေရေးရာအနက် Nokia က စီပီယူ processor ​​ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စမတ်ဖုန်းများ ပရိုဆက်ဆာ Qualcomm မှ Samsung ရဲ့ Galaxy နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း